चैत १८ गते दुई लघुवित्त कम्पनीको साधारणसभा हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > वित्त > चैत १८ गते दुई लघुवित्त कम्पनीको साधारणसभा हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ?
चैत १८ गते दुई लघुवित्त कम्पनीको साधारणसभा हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । आउँदो चैत १८ गते बुधवार दुई लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले फरक–फरक स्थानमा साधारणसभा गर्ने भएका छन् । उक्त दिन मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सभा गर्ने भएका हुन् ।
सभामा मिर्मिरे लघुवित्तले आव २०७६/७७ मुनाफाबाट ९.१९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.४८ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभा प्रयोजनाका लागि कम्पनीले चैत १ देखि १४ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको छ ।
त्यस्तै, चैत १८ गते महिला सहयात्रा लघुवित्तले पनि सभा गर्ने भएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट १० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०. ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले चैत ३ देखि १७ गतेसम्म कम्पनीले बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
२०७७ चैत्र १५ गते १४:४९ मा प्रकाशित
बजारमा थपियो १ करोड ९ लाख कित्ता सेयर
समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न शैक्षिक जनशक्ति आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली
प्रभु बैंकले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दियो १ करोड ३९ लाख